By Soo -saareyaasha Qalabka iyo Alaab -qeybiyeyaasha - Shiinaha By Warshadda Maaddada
1.7 oz oz HDPE madow dhalo fidsan oo leh 12-410 qoorta dhammeystiran
17 oz casaan PETG dhalo dareere labajibbaaran oo leh 28-410 nec ...
2 oz dhalada cad ee PP oo leh 34-400 qoorta dhammaatay
0.4 oz oo cad PMMA (Acrylic) oo dabool leh oo dhalo afka balaastik ah oo balaastig ah leh 22-400 qoorta dhammaatay
0.4 wiqiyadood oo caag ah PMMA (acrylic) caagad dhalada kaabsal yar ah ayaa samayn karta suudh isku dhafan, saamaynta muuqaalka ah ee gidaarka dhalada caagga ah oo dhumuc weyn waa darajo aad u saraysa. Naqshad daboolid labalaab leh, iyada oo loo marayo daboolka kore ee hufan ayaa lagu arki karaa daboolka dahabka ah ee gudaha ku jira, daboolka dibadda iyo jirka dhalada oo u eg qaab cylindrical ah. Ku daabac astaantaada gaarka ah dusha sare ee dhalada ama dhalada si aad u iftiimiso sumaddaada.
6 oz oo cad PMMA (Acrylic) dhalo afka balaastik ah oo balaastig ah oo leh 44-410 qoorta ayaa dhammaatay
Dhalada caaga ah oo leh dabool bir ah oo hufan. Qaabka dhalada ah, daboolka iyo jirka kaabsalku waxay haystaan ​​dhexroor isku mid ah, jirka dhalada hufan iyo gidaarka dhalada caagga ah oo dhaadheer ayaa badeecada ka dhigaya mid muuqaalkeedu wanaagsan yahay. Daawada Shiinaha, alaabada caafimaadka, iwm Afka dhalada waxaa lagu shaabadeeyay gaas -bireed aluminium si loo hubiyo 100% saamaynta shaabadaynta.
3-5ml midab dabiici ah oo siman cirbadda cirbadda ee PP
Tuubbooyinka Codsiga Saliid ee midabka 3/5ml wuxuu ka samaysan yahay walxo PP, oo leh xidhitaan wanaagsan iyo dabacsanaan. Waxaa loo isticmaali karaa qalab duritaan oo loogu talagalay jel dareere ah. Tuubadu waa tuubbo fidsan oo dhexroor yar leh, jirka tuubada waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan caadooyinka isticmaalka ee kala duwan waxayna u baahan tahay inay ku siiso dareen gacanta ka wanaagsan iyo saamaynta shaashadda. Markaad isticmaaleyso, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad u dhoofiso dawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si aad u riixdo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, iyo baakadaha daryeelka dabada. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo. Codsadeheena siilka waa badeeco baakadeyn hal mar ah waxaana si shaqsi ahaan loo soo baakadeyn karaa aseptically. Haddii aad leedahay qaab ka fiican, waxaan ku siin karnaa habayn karti leh. Tube Test Custom
3-5ml hufnaan dabiici ah oo fidsan cirbadda cirbadaha PP
Codsadeena Siilka 3/5ml wuxuu ka samaysan yahay wax PP, kaas oo leh xidhitaan wanaagsan iyo dabacsanaan. Waxaa loo isticmaali karaa qalab duritaan oo loogu talagalay jel dareere ah. Tuubadu waa tuubbo fidsan oo dhexroor yar leh, jirka tuubada waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan caadooyinka isticmaalka ee kala duwan waxayna u baahan tahay inay ku siiso dareen gacanta ka wanaagsan iyo saamaynta shaashadda. Markaad isticmaaleyso, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad u dhoofiso dawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si aad u riixdo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, iyo baakadaha daryeelka dabada. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo. Codsadeheena siilka waa badeeco baakadeyn hal mar ah waxaana si shaqsi ahaan loo soo baakadeyn karaa aseptically. Haddii aad leedahay qaab ka fiican, waxaan ku siin karnaa habayn karti leh.
3ml dabiici ah oo casaan ah PP Qaybiyaha dawada siilka-dabada
Tuubadayada 3ml Vacuum Gel Tube waxay ka samaysan tahay walxaha PP, kaas oo leh xidhitaan iyo dabacsanaan fiican. Waxaa loo isticmaali karaa sidii qalab gelinta daroogada jel dareere ah. Tuubadu waa tuubbo wareegsan oo dhexroor yar leh. Naqshadda qaabka caadiga ah waxay ku siin kartaa dareen ka wanaagsan iyo saamaynta muujinta shafka. Markaad isticmaaleyso, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad u dhoofiso dawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si aad u riixdo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, iyo baakadaha daryeelka dabada. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo. Codsadeheena siilka waa badeeco baakadeyn hal mar ah waxaana si shaqsi ahaan loo soo baakadeyn karaa aseptically. Haddii aad leedahay qaab ka fiican, waxaan ku siin karnaa habayn karti leh.
5ml bule saliingaha cirbadda dabiiciga ah ee PP
Saliingeheena 5ml bule/sirinjiga futada waxaa laga sameeyay walxo PP, oo leh xirmo wanaagsan iyo dabacsanaan. Waxaa loo isticmaali karaa qalab duritaan oo loogu talagalay jel dareere ah. Tuubadu waa tuubo wareegsan oo dhexroor yar leh oo leh jidh caato ah. Marka loo eego caadooyinka iyo baahiyaha adeegsiga ee kala duwan, waxay ku siin kartaa dareen gacanta ka wanaagsan iyo saamaynta shaashadda. Markaad isticmaaleyso, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad u dhoofiso dawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si aad u riixdo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, iyo baakadaha daryeelka dabada. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo. Codsadeheena siilka waa badeeco baakadeyn hal mar ah waxaana si shaqsi ahaan loo soo baakadeyn karaa aseptically. Haddii aad leedahay qaab ka fiican, waxaan ku siin karnaa habayn karti leh.
5ml dabiici ah PP Qaybiyaha dawada siilka-dabada
Saliingeheenna jel 5ml wuxuu ka samaysan yahay walxo PP, kaas oo leh xidhitaan wanaagsan iyo dabacsanaan. Waxaa loo isticmaali karaa sidii qalab gelinta daroogada jel dareere ah. Tuubadu waa tuubbo wareegsan oo dhexroor yar leh. Wuxuu ku siin karaa dareen ka fiican iyo saamaynta muujinta shelf. Markaad isticmaaleyso, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad u dhoofiso dawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si aad u riixdo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, iyo baakadaha daryeelka dabada. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo. Codsadeheena siilka waa badeeco baakadeyn hal mar ah waxaana si shaqsi ahaan loo soo baakadeyn karaa aseptically. Haddii aad leedahay qaab ka fiican, waxaan ku siin karnaa habayn karti leh.
5ml dabiici ah oo casaan ah PP Qaybiyaha dawada siilka-dabada
Balastarka noolaha 5ml ee siilka wuxuu ka samaysan yahay walxaha PP, kaas oo leh xidhitaan iyo dabacsanaan fiican. Waxaa loo isticmaali karaa sidii qalab gelinta daroogada jel dareere ah. Tuubadu waa tuubbo wareegsan oo dhexroor yar leh. Naqshadda qaabka caadiga ah waxay ku siin kartaa dareen ka wanaagsan iyo saamaynta muujinta shafka. Markaad isticmaaleyso, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad u dhoofiso dawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si aad u riixdo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, iyo baakadaha daryeelka dabada. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo. Codsadeheena siilka waa badeeco baakadeyn hal mar ah waxaana si shaqsi ahaan loo soo baakadeyn karaa aseptically. Haddii aad leedahay qaab ka fiican, waxaan ku siin karnaa habayn karti leh.
0.3 0.5 oz oo ah HDPE dhalo dhibic fidsan oo fidsan oo leh 8-400 qoorta dhammaatay
Waxaan u leenahay laba cabbir oo loogu talagalay caagadan dhibcaha caagga ah ee caagga ah: 0.3oz/8ml iyo 0.5oz/15ml. Dhalada qaybiyaha dhibicdu waxay ka samaysan tahay qalabka HDPE. Dusha dhalada waxaa lagu daabici karaa shaashad ama lagu daaweyn karaa koolo. Calaamadda ay soo saartay shirkaddaadu waxaa loo samayn karaa si kor loogu qaado saamaynta sumcadda shirkaddaada. Qaabka guud ee dhalada caaggu waa mid is haysta, oo ku siineysa khibrad aad u fiican iyo saamaynta shaashadda. Daboolka wuxuu qaataa daboolka dunta hubi in badeecadu tahay 100% xidhitaan.Waxa loo isticmaali karaa weelka dhibcaha indhaha, baakadaha saliidda ee muhiimka ah, dhalooyinka baakadaha sigaarka elektarooniga ah, dhalooyinka dhibicda isha ee madhalays ah, dhalooyinka dhibicda indhaha ee la tuuro.
5ml hufnaan saliingaha duritaanka PP
Saliingeheenna siilka/dabada 5ml ayaa laga sameeyay walxaha PP, kaas oo leh xidhitaan iyo dabacsanaan fiican. Waxaa loo isticmaali karaa qalab duritaan oo loogu talagalay jel dareere ah. Tuubadu waa tuubo wareegsan oo dhexroor yar leh oo leh jidh caato ah. Marka loo eego caadooyinka iyo baahiyaha adeegsiga ee kala duwan, waxay ku siin kartaa dareen gacanta ka wanaagsan iyo saamaynta shaashadda. Markaad isticmaaleyso, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad u dhoofiso dawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si aad u riixdo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, iyo baakadaha daryeelka dabada. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo. Codsadeheena siilka waa badeeco baakadeyn hal mar ah waxaana si shaqsi ahaan loo soo baakadeyn karaa aseptically. Haddii aad leedahay qaab ka fiican, waxaan ku siin karnaa habayn karti leh.
5ml hufnaan dabiici ah PP muddo dheer qaybiyaha dawada Vagino-anal
Tube -keena 5g ee Saliidda Siilka ayaa laga sameeyay walxaha PP, kaas oo leh xirmo wanaagsan iyo dabacsanaan. Waxaa loo isticmaali karaa sidii qalab gelinta daroogada jel dareere ah. Tuubadu waa tuubo wareegsan oo dhexroor yar leh oo leh jidh caato ah. Marka loo eego caadooyinka iyo baahiyaha adeegsiga ee kala duwan, waxay ku siin kartaa dareen gacanta ka wanaagsan iyo saamaynta shaashadda. Markaad isticmaaleyso, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad u dhoofiso dawada siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si aad u riixdo daawada ku jirta tuubada siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dawada siilka, daryeelka siilka, dawaynta dabada, iyo baakadaha daryeelka dabada. Way fududahay in la qaado oo la isticmaalo. Codsadeheena siilka waa badeeco baakadeyn hal mar ah waxaana si shaqsi ahaan loo soo baakadeyn karaa aseptically. Haddii aad leedahay qaab ka fiican, waxaan ku siin karnaa habayn karti leh.
1.7 oz oz HDPE dhalo dhibic fidsan oo fidsan oo leh 12-400 qoorta dhammaatay
Dhaladayada dhibicda cas ee 50ml ah waxay ka samaysan tahay wax HDPE ah. Dhalada waa siman tahay. Dusha dhalada waxaa lagu daabici karaa shaashad ama lagu daaweyn karaa koolo. Waxay samayn kartaa astaanta shirkaddaada, waxay kor u qaadeysaa saamaynta sumcadda shirkaddaada. Qaabka guud ee dhalada caagga ah waa mid kooban, oo ku siinaysa waayo -aragnimo gacmeed oo ka wanaagsan iyo saamaynta muujinta shelf. Daboolka dhalada ayaa qaata daboolka daboolka iyo baakadka si loo hubiyo in 100% la xiro badeecada. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu shubo oo lagu kaydiyo dareeraha badankooda.Waxay u fiican tahay dareeraha, saliidaha fudud, rinjiga, nuxurka, sigaarka elektiroonigga ah, dhibcaha indhaha, milixda, iwm si fudud baa loo nadiifin karaa.